Kiiska dacwad ka dhan ah Kheyre oo soo shaac baxday. | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Kiiska dacwad ka dhan ah Kheyre oo soo shaac baxday.
Kiiska dacwad ka dhan ah Kheyre oo soo shaac baxday.
Xubno ku dhow dhow Ex Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa laga soo xigtay inay ka war-hayaan inuu jiro qorshe la doonayo in Xafiiska Hanti-dhowraha Qaranka, xeer ilaalinta iyo maxkamadaha ay baaritaan iyo dacwado ku furaan Xasan Cali Kheyre.
Waxaa isa soo taraya Cabsida jirta waxaa ka mid ah in Kheyre lagu eedeeyo musuq-maasuq iyo ku takri fal awoodeed, kuwaasi oo dhacay mudadii uu Kheyre xafiiska joogay.
Sidoo kale waxaa la tilmaamayaa in arrintan qeyb ka tahay ololaha doorashooyinka, balse uu ku rajo weynyahay in shacabka Soomaaliyeed ay dareemi doonaan ujeedka laga leeyahay kiis kasta oo lagu furo Kheyre si qal qal siyaasadeed loo galiyo.
Dhinaca kale xubno ku dhow Villa Somalia ayaa sheegaya inaysan jirin wax lug ah oo ay ku leeyihiin cabsida jirta, islamarkaana hay’adaha garsoorka iyo hanti-dhowrka ay yihiin kuwa madax-banaan.
Balse Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre iyo dadka ku dhow ayaa ka cabsi qaba beegsi kaga yimaada Villa Somalia oo dacwado iyo ceebeyn ah, kaasi oo lala beegsado Kheyre, sida xog hoose lagu helay.
Xasan Cali Kheyra ayaa horey u sheegay in uu yahay musharax madaxweyne waxaa uu hadda ku sugan yahay dalka Kenya oo uu ka wado ololaha doorasho.
Maqaal horeDEG-DEG Kenya oo Seddex nin ku wareejisay Odayaasha Ceelwaaq
Maqaal XigaFaahfaahinta Dagaal dhexmaray Al-Shabaab & Ciidaanka Xooga Dalka.